Shiinaha oo Kenya amaah siiyay si loo ballaariyo kaabayaasha Fibre-optic - Sabahionline.com
Shiinaha oo Kenya amaah siiyay si loo ballaariyo kaabayaasha Fibre-optic Juunyo 29, 2012
Shiinaha ayaa oggolaaday in Kenya uu ammaahiyo 71 milyan oo doollar oo u dhiganta lix bilyan oo shilin si loo dhiso kaabayaasha qaranka ee Optic Fibre Backbone (NOFBI) [oo ah xargaha qaada macluumaaka internetka ee mara badda hoosteeda) iyo ballaarinta maashaariicda dowladda, capital FM-ta Kenya ayaa Khamiisti (28-ki Juun) warisay. Qodobbo la xiriira
Dowladdaa Hoose ee Nairobi oo shaaca ka qaadday miisaaniyad 185 milyan oo doolar ah
Saadaasha dhaqaalaha Kenya oo wanaag bishaaraynaysa sida ay sheegtay IMF
Joseph Kinyua, oo ah xog-hayaha joogtada ee wasaarradda dhaqaalaha ayaa war-gayska u sheegay in labada dowladood ay si qabyo ah isugu raaceen heshiiska, iyadoo la qorshanayo in si rasmi ah loo saxiixo dhammaadka bisha July. Mashruuca lasoo jeediyay ayaa maamullada 16 degmo ee Kenya ku xiriirin doona fiilada national fibre-optic, isagoo kor u qaadaya tayada internetka. “Marka la dhamaystiro arrintan, maashruca waxa uu soo kordhin doonaa, isgaarsiin ammaan ah, lagu kalsoonaan karo oo waxtar u leh dowladda iyo muwaadiniinta,” ayuu yiri Kinyua. Mar hore ayaa fiilada Fibre-optic waxaaa laga hir-galiyay dhowr casimad-goboleed, balse Kinyua ayaa sheegay in aan wali la isku xiriirin. Marka la helo Internet xawaarihisu sarreeyo, ayuu Kinyua waxa uu sheegay in xukuumaddu dhaqan-galin doonto qorshayaal ku shaqeeya elektarooniga sida caafimaadka, bangiyada iyo waxbarashada, si lo xoojiyo koboca dhaqaalaha. Muxuu kula yahay qoraalkan?